ပုံ "Inclure" ပွငျသစျထဲတွင် conjugation (Include မှ) လား?
ပြင်သစ်တွင် "Inclure" (Include မှ) Conjugate လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ကြိယာ conjugation အတွက်ဤ "Include"
သင်ကြိယာ inclure ကိုသုံးပါ, ပြင်သစ်တွင် "ထည့်သွင်းရန်" ဟုပြောလိုသောအခါ။ အင်ျဂလိဖို့တူညီမှုကြောင့်သတိရဖို့လွယ်ကူပါတယ်တဦးတည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ သို့သျောလညျး, ကနေဆဲ "ပါဝင်သည်" သို့မဟုတ် "အပါအဝငျ" အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားကြိယာပုံစံများများ၏အဓိပ္ပါယ်များအပေါ်ယူ conjugated ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်သစ်သင်ခန်းစာဤအမှုကိုပြုသောဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ပြင်သစ်ကြိယာ Inclure Conjugating
Inclure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မမှန်ကြိယာ , ဒါကြောင့်ဘုံကြိယာ conjugation ပုံစံများတဦးတည်းကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါ။
သို့ရာတွင်ထိုသို့တယောက်တည်းနေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့တူညီတဲ့ကြိယာနောက်ဆုံးတွင်လည်းတူသောအလားတူကြိယာမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် conclure (ကောက်ချက်ချရန်) , exclure (ထုတ်ပယ်ရန်), နှင့် (occlude မှ) occlure ။
အားလုံးကြိယာ conjugation နှင့်ဝသကဲ့သို့ , ထိုကြိယာကို stem ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်စတင်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို inclu ဖြစ်ပါသည် - ။ ယင်းနောက်အဆုံးသတ်အသစ်တစ်ခု infinitive add ဘာသာရပ်နာမ်စားသည်နှင့်အညီ နှင့်တင်းမာနေ။ သူတို့ကပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောတင်းမာနေ၏အသီးအသီးအဘို့ကွဲပြားခြားနားနေဒါမှတ်မိဖို့ကပိုစကားများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, "ကျွန်မတို့ပါဝင်သည်" ဖြစ်ပါတယ် "ကျနော်တို့ပါဝင်သည်လိမ့်မည်" နေစဉ် "j'inclus" ဖြစ်ပါတယ် "nous inclurons ။ "
ဆက်စပ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးကြိယာ, နာမဝိသေသန, နာမ်, ဒါမှမဟုတ် gerund ဖြစ်စေအဖြစ်အသုံးပြုသည် အများကိန်း ပုရွက်ဆိတ်ကြိယာကို stem မှ - ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
inclure အဘို့, ဒီ incluant မှု။
အဆိုပါမစုံလငျတဘက်, သငျသညျကိုလညျးသုံးနိုငျ Pass တေးရေးဆရာ အတိတ်တင်းမာနေဖွဲ့စည်းရန်ပွငျသစျထဲတွင် "ပါဝင်သည်" ။ ဒီဖွဲ့စည်းရန်၏သင့်လျော်သော conjugation နှင့်အတူစတင် avoir (တစ်ဦး အရန်သို့မဟုတ် "ကူညီပေးနေ" ကြိယာ ဘာသာရပ်နာမ်စားကိုက်ညီဖို့) ။
ထို့နောက်ပူးတွဲ အတိတ် participle inclus ။ ဥပမာ, "j'ai inclus" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် "ကျနော်တို့ပါဝင်သည်" "nous Avon inclus ။ " "ငါပါဝင်သည်"
သိပါဖို့ပိုရိုးရှင်းသော Inclure conjugation
အချိန်ကျော်, သငျသညျမြားကိုလညျး inclure အနည်းငယ်ပိုပြီးရိုးရှင်း conjugation များအတွက်အသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေပေမည်။ အဆိုပါ subjunctive ကြိယာစိတ်ဓါတ်များ အပါအဝင်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်နည်းနည်းနဲ့မသေချာမရေရာအခါဥပမာ, ကိုအသုံးပြုသည်။ အလားတူထုံးစံများတွင် အဆိုပါခြွင်းချက်ကြိယာစိတ်ဓါတ်များ အခြားအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ကောင်းစွာမလျှင်အပါအဝင်သာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
၏စာပေတင်းမာနေ သည့် Pass ရိုးရှင်းသော နှင့် ယင်းမစုံလငျ subjunctive အဓိကအားတရားဝင်အရေးအသား၌တွေ့နေကြပါတယ်။ သငျသညျပြင်သစ်တွေအများကြီးကိုဖတ်ပါလျှင်ဤကိုလည်းသိရန်ကောင်းသောလိမ့်မည်။
အဆိုပါအလွန်အရေးကြီးသည်ကြိယာပုံစံ အကြောင်းအရာနာမ်စားမလိုအပ်ပါဘူးသောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိယာသည်ဤတိုတောင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအတွက်အဘယ်သူကိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကွောငျ့ကြောင်းပါပဲ။ အဲဒီအစား "tu inclus," ကရိုးရှင်းသည်ထက် "inlcus ။ "
အဆင့်မြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း - B, C
ပြင်သစ်ဖိနပ်, ဖိနပ်များနှင့် Flip-flops ဝေါဟာရ - Les Chaussures
အီတလီတွင်ချိန်းတွေ့ဘို့ romantic စကားစုများ
Schwer သို့မဟုတ် Schwierig, Einfach သို့မဟုတ် Leicht?
ပြင်သစ်အစားအသောက်ဝေါဟာရ -, La Nourriture - သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ဂျပန် Ijiwaru ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
စာနယ်ဇင်းများ၏5WS (နှင့်တစ်ဦး H ကို)
နမူနာ Business Plan
သခင်ဘုရားသည် Shiva 12 စိတ်ဝင်စားဖွယ် Form များ
သူတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝအသက် Remembering ကလေးများပြောပြတယ်ပုံပြင်များ
အီတလီကြိယာ conjugation: Riposarsi
မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Servir '' Conjugate လုပ်နည်း
ကဲသာဘုရင် Pelli သည်ပက်ထရိုနပ်မျှော်စင်၏ဖန်ဆင်းရှင်
သင်က Impressionism တခုတခုအပေါ်မှာစာစီစာကုံးရေးရန်ခင်မှာ
"Un bel di, vedremo" စာသားနဲ့ဘာသာပြန်စာပေ
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ပထမဦးစွာ Shots
အဆိုပါ 26 ပြင်ဆင်ရေး: 18-တစ်နှစ်တာအိုးများအတွက်မဲပေးခငြ့်အရေး
ယင်းက Round ရော်ဘင်ဂေါက်သီး Format ကို Play လုပ်နည်း
စပိန်ကြိယာ '' Creer '' အသုံးပြုခြင်း
တိရိစ္ဆာန်သိုလှောင်: က "ကြောင်သမ္မတကတော်" ကျပုံစံနောက်ဝယ်စိတ်ပညာ
ယောဟနျသ Ericsson က - ထိုသင်္ဘော USS Monitor ၏တီထွင်သူနှင့်ဒီဇိုင်နာ
တစ်ဦး Parabola ၏ y ကိုကြားဖြတ်ရှာဖွေခြင်း
တော်ဝင်ရေတပ်: ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရစ်ချတ် Howe, 1st Earl Howe